जान्नुहोस् कुन राशि संग बिहे गर्नु हुँदैन – आफ्नो समाचार
Afno News — २५ कार्तिक २०७५, आईतवार ०५:५४0comment
के तपाईंहरु श्रीमान श्रीमतीको सँगको सम्बन्ध राम्रो छैन ? के तपार्इंहरु एक आपसमा झगडा गरिरहनुहुन्छ । यस्तो तव हुन्छ तपाईहरुको ग्रह अनुसारको स्वभावमा मेल खाँदैन । पति पत्नीबीचको तनावका कारण राशि पनि हुन सक्छ । आउनुहोस् जान्नुहोस् तपाईको कस्तासँगको सम्बन्ध राम्रो र नराम्रो हुन्छ ।
मिथुन राशिः यो राशि भएका मानिस वफादार तथा मोज मस्ती गर्ने प्रवृत्तिका हुन्छन् । यी राशिभएकाहरु आफ्नो जिन्दगीमा सधै नयाँ गर्ने बारेमा सोच राखिरहेका हुन्छन् । यी राशिका लागि मकर राशि भएका मानिस सही मान्दिैनन् । किनकी मकर राशिका मानिस मिथुन राशि भएकाहरुलाई उत्तेजित गर्न सक्दैनन् । मकर राशिका मानिस समय अनुसार हिड्न मनपराउँछन् । जहाँ मिथुन राशिका मानिस ‘जे पर्छ टर्छ’ भन्ने प्रकृतिका हुन्छन् ।
सिंह राशिः सिंह राशि भएका मानिसमा आत्मविश्वास धेरै हुन्छ । साथै यो राशिका मानिस आकर्षक पनि हुन्छन् । सिंह तथा वृश्चिक राशि भएका मानिसको सम्बन्ध त्यति राम्रो हुँदैन । किनकी वृश्चिक राशि भएकाहरु जिद्दी तथा ईष्र्यालु स्वभावका हुन्छन् । जसलाई सिंह राशिवाला मन पर्दैन ।
मकर राशिः यो राशि भएका मानिस इमानदर, वफादार तथा महत्वाकांक्षी हुन्छन् । यसका सबैभन्दा खराव जोडी मिथुन राशि भएका मानिस हुन्छन् । किनकि मकर राशि भएकाहरुमा समझदारीताको कमी हुन्छ ।
वि.सं. २०७५ माघ १२ गते शनिबारको राशिफल
गुनासो सहित मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौंमा भेला हुँदै